हेमजामा क्यन्सर परिक्षण शिबिर, ३६४ ले गराए स्वास्थ्य परिक्षण — SuchanaKendra.Com
हेमजामा क्यन्सर परिक्षण शिबिर, ३६४ ले गराए स्वास्थ्य परिक्षण
गोबिन्द तिमिल्सना हेमजा, । पोखरा महानगपालिका वडा न. २५ को वडा कार्यालय र हेमजा स्वास्थ्य चौकीको आयोजनामा यौन रोग तथा पाठेघर मुखको क्यन्सर परिक्षण तथा अभिमुखिकरण बिहिबार हेमजामा सम्पन्न भएको छ । शिबिर सोमबार सुरु भइ ४ दिनसम्म हेमजाको बिभिन्न ठाउँमा भएको थियो । शिबिरमा ३० देखि ६० बर्ष उमेर समुहका ३६४ महिलाले सेवा लिएका थिए । जस मध्य ४ जनालाई भि.आइ.ए पोजेटिब, ८ जनामा संकास्पद र ६ जनाको पाठेघर मुख वरिपरि मासु पलाएको भएटिको थियो । उक्त १८ महिलालाई थप उपचारका लागि पोखरा स्वस्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान रेफर गएिको छ । सोहि अबसरमा ४ महिलाले लामो समयको अस्थाही साधनको प्रयोग गरेका थिए ।
महानगरको स्वस्थ्य महाशाखाले निःशुल्क औषधी पनि दिएको थियो । साथै केही औषधी स्वस्थ्य चौकीले पनि खरिद गरी बितरण गरेको इन्चार्ज कुस्मराज सुबेदीले बताए । उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्र तथा बजारमा समेत पाठेधरको मुख क्यन्सर भेटीएपछि वडाका चार स्थानमा परीक्षण शिबिर तथा अभिमुखीकरणको आयोजना गरिएको हो । उनले भने यस्ता कायक्रमलाई पछि पिन निरन्तरता दिने बताउदै गाउँ गाउमा यस्ता कायक्रमले सहयोग भएको छ । उक्त अबसरमा शिबिरमा खटिएका डा. अम्बिका भुसाल लगाएतका टोलिलाइ सम्मान गरिएको थियो ।
स्वस्थ्य महाशाखा नर्सिङ निरिक्षक सबिना श्रेष्ठले यौनरोग तथा पाठघर सम्बन्धि समस्य उजागर गन यस्ता कार्यक्रमले सहयोग मिल्ने बाउदै ५ बषमा एक पटक पाठेघरमा भि.आइ. ए परिक्षण गनुपर्ने उल्लेख गरिन । स्वयंसेबिकाको वडाध्यक्ष शान्ता केसीले अझै पनि महिलाहरुमा रोग लुकाउने प्रबति भएको भएतामा पनि अहिले खुलेर शिबिरम आएकोमा खुसि ब्यक्त गरिन । वढा सदस्य लक्ष्मि अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा सदस्य जित ब. कार्की र डा अम्बिका भुसालले आफनो भनाइ राखेका थिए ।